Denim Laser Washing achiita zvokutemera - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Denim Laser Washing achiita zvokutemera
Denim Laser Washing achiita zvokutemera Solutions
Jeans / T-Shirt / Clothing / bhachi / Corduroy
Laser Washing achiita zvokutemera vangaitei?
Denim pamunhu mumwe achiita zvokutemera / sekero / Tsoko geza / Gradient / Ripped / akagadzirira-to-kupfeka 3D rokusika achiita zvokutemera
The muzvigadzirwa utsanzi pamusoro denim Washing indasitiri - denim Laser achiita zvokutemera , ichi razova choruzhinji michina muEurope.
Denim Laser Washing kwava digitaalinen uye zvaitika kugadzira muoti. Haikwanise chete kuziva ruoko mumakwenzi, usopo, Tsoko kuwacha, akabvarura ari chinyakare kugadzirwa muitiro, asi kushandisa Laser kuti etch mitsetse, maruva, anotarisana, tsamba nenhamba, achiratidza okusika migumisiro. Haikwanise chete kuziva batch mangé kubudiswa Washing kwacho, asi kusangana musika zvinoitwa munhu zvichienderana duku batch mangé customization.
Mumwe muchina chakatsiva vashandi vashanu. The muchina iri zvoga zvizere uye akarongeka.
A-siyana pezvakaitwa yakaoma, zvakadai sekero, 3D usopo, Tsoko kuwacha, gradient, akabvarura, uye chero mazano rokusika, chete Laser kuti nyore.
Kurumidzai kupindura itsva chigadzirwa kukura, uye muitiro rinodzorwa nenguva chaiyo.
Traditional Chinyorwa basa, unhu kwakaoma kudzora. The Laser achiita zvokutemera apedza chigadzirwa ane zvikuru chinja zvazviri, yakarurama uye akatsiga unhu.
Low uchishandisa mari
European ano, yakatsiga uye yakavimbika, usingashandi Nokuraramisa cost, chete vanoda 7 kWh paawa.
Golden Laser - Laser Washing achiita zvokutemera hurongwa ndiyo yakanakisisa sarudzo kuwedzera mubereko denim jira zvigadzirwa.
Energy aponese uye zvakatipoteredza ushamwari
Traditional pezvakaitwa upise yakawanda kwemakemikari reagents, uye akawanda crow vanokonzera kutambisa mvura, uye pauri tsvina zvinokuvadza zvakatipoteredza. Laser kugeza rinopedzisa mashoko siyana anokonzerwa majini zviri nyore nzira, kuvandudza nekubata kwezvakatipoteredza, simba okuponesa uye kudzivirira zvakatikomberedza.
Laser Washing rinobatanidza nevamwe tsika unyanzvi kuti kusika rakasiyana mukuru-kuguma Boutique denim.
Laser Washing achiita zvokutemera hurongwa kwete chete inotungamirira denim kubudiswa indasitiri, asiwo inogona mafomu akadai matehwe, Mabhachi, T-shirts, uye corduroy nguvo, uye ane yakafara applicability kuti siyana Whitehead Textile uye nenguvo zvokuvakisa. 2D / 3D okusika achiita zvokutemera zvazviri runogonesa wakafara ukoshi nzvimbo yacho chigadzirwa.
Laser Washing achiita zvokutemera System
THIS Laser washing achiita zvokutemera SYSTEM ARI zvikuru akagadzirirwa Jeans AND DENIM NGUO achiita zvokutemera.
Denim Laser kugeza uye achiita zvokutemera gadziriro, ayo vanoshanda musimboti ndiko kushandisa kombiyuta kugadzira, marongerwo, uye kuti PLT kana BMP mafaira, uye ipapo kushandisa CO2 Laser achiita zvokutemera muchina kuti Laser danda refu tembiricha etching pamusoro pemvura nenguvo jira maererano nemirayiridzo kombiyuta . Rwebhuruu pasi kumusoro tembiricha etching iri ablated, dhayi yacho vaporized, uye siyana pakadzika etching vari kuumbwa kubudisa muenzaniso kana zvimwe Washing maturo. mapatani izvi zvinogona yakashongedzwa nezvakarukwa, sequins, ironing, uye simbi nenhumbi kuti dzikurukure kunyorwa mugumisiro.
More pamusoro chigadzirwa ichi
Professional software, nyore kuti ishande, nyore kutendeutsa Graphics chero nguva.